Nezvedu - Hebei Pukang Medical Instruments Co, Ltd.
Hebei Pukang Medical Instruments Co, Ltd. yakavambwa muna1996, sebhizinesi diki nerekunamatira capital RMB 500,000, pasi nzvimbo ye 16.3 mu uye vashoma chete vashandi pakuvambwa kwayo. Mazuva ano, kambani yakarongedzerwa kugadzira mibhedha yekurapa yekurapa, fenicha yekurapa, tsvuku yekurapa michina uye zvimwe zvigadzirwa zvekare, ine capital yakanyorwa yeRMB mamirioni mazana maviri, pasi nzvimbo ye180 mu, nzvimbo yekuvaka ye9,000 mativi emamirimita, vanopfuura vashandi mazana mashanu nemakumi mashanu pagore kuburitswa kwemazana mazana matatu ezviuru (zvidimbu).
Iyo kambani yapfuura ISO 9001 mhando system certification, ISO 13485 quality system certification, EU CE certification, US FDA certification, ISO 14001 yezvemamiriro ekunze system system certification, OHSAS 18001 inoshanda muhutano nekuchengetedza system management system uye weChina akasarudzwa mutengesi wekupedza hurombo uye zvehutano zveinjiniya zvekurapa. Chayo "Little Nurs" trademark yakapihwa se "Hebei Famous Trademark" uye chigadzirwa chakapihwa se "Hebei Famous Brand Product", ichihwina zvinopfuura makumi matatu zvesurefu zvakapihwa neenyika, mudunhu, manisipari uye nemamwe madhipatimendi.
Iyo kambani parizvino ine michina yepamusoro yekugadzira michina yekugadzira, senge laser yekucheka muchina unounzwa kubva kuGermany, boring uye milling processing Center (USA), marobhoti anogadzira akatengwa kunze kubva kuJapan, laser tube yekucheka muchina, pendi gungano mutsara (Sino-US mubatanidzwa) uye zvichingodaro. kubuda.
Parizvino, iyo kambani inopa inhabvu nyanzvi yechikwata chemishini, zvemagetsi, dhizaini yekuwoneka, nezvimwewo, yakazvimirira R&D yezvigadzirwa zvehutano hwakasiyana siyana uye huzere kuzadza zvipatara muzvikamu zvese. Iyo kambani yakawana zvinopfuura zana patents, yakatungamira mune imwecheteyo indasitiri munyika yese, yakapihwa mazita eepurovhinzi "Technical Center", yeprovince "High-tech Enterprise", "Sayenzi uye Technological SME", uye yakachengetedza kwenguva yakareba. kuchinjanisa kwounyanzvi, kubatana kwevashandi uye kumwe kushandira pamwe neTianjin University, pamwe neBeijing Technology uye Bhizinesi University. Muna 2017, kambani yakasaina chibvumirano chekudyidzana chekubatana neBeijing Aerospace Long March Launch Vehicle Technology Co, Ltd., ichicherekedza nhanho inoshamisa uye yakasimba yekubatana kuumba kurapwa kwevanhu vezvemitambo yeaerospace tekinoroji.
Kubva pekutangaMukoti Mudiki"Mubhedha wakawanda wekuyamwisa wakavambwa muna 1997, kambani iyi yakavandudza zvigadzirwa zvinomwe, ikawana mibairo yakawanda, nekuvapo kwebhizinesi munyika dzinodarika zana nematunhu muEurope, Asia, Africa neAmerica, uye yakatanga hukama hwebhizimusi kwenguva refu mazana eGiredhi-III Kirasi-A zvipatara munyika yose. Zvichakadaro, nechinangwa chekushandira vatengi zviri nani, kambani yakaisa mahofisi uye mashopu ekutengesa mushure mematunhu anodarika makumi maviri.
Iyo kambani inoomerera pakugadzira zvigadzirwa zvekurapa zvakafanira sechisungo chayo, ichichengetedza hutano sekuita kwayo, nekuvaka bhizinesi remazana zana sechinangwa chayo, kusimudzira hutano hwemakambani uye kupa simba redu mukuvandudza indasitiri yekurapa yezvokurapa inoenderana nesainzi uye inoshanda manejimendi yekushandisa .